အဟော့ဆုံး အလန်းဆုံး MMA Ring Girls (၅)ယောက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….. - Zeekwat Hot News
အဟော့ဆုံး အလန်းဆုံး MMA Ring Girls (၅)ယောက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…..
August 11, 201901280
အရမ်းကိုလန်းတဲ့ MMA Ring Girls (၅)ယောက် ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါ တယ်။ Ring Girls ဆိုတာကတော့ လက်ဝှေ့ပွဲတွေ၊ Kickboxing နဲ့ MMA ပွဲတွေမှာ ဘယ်နှစ်ချီ (ဘယ် Round) ရောက်နေတယ်ဆိုတာကို နံပါတ်ပြားတွေ ကိုင်ပြီးပြတဲ့ အလန်းလေးတွေပါ။ Ring girls တွေ ဟာ (၁၉၆၅) ခုနှစ်က Ring Magazine ကနေ စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။ Boxing ပြိုင်ပွဲသင်္ကေတတစ်ခုကို ကိုင်ထားတဲ့ Las Vegas မော်ဒယ်တစ်ယောက်ရဲ့ပုံကို မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ အဲဒီကနေမှ နောက်ပိုင်းမှာ Boxing ပွဲတွေမှာ ကောင်မလေးတွေကို ငှားကြရင်း Ring girls ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။ အလန်းဆုံး MMA Ring Girls (၅)ယောက်ကတော့ …
Photo : Carly Baker
Carly Baker ကတော့ UFC အတွက် ကတ်တွေသယ်တဲ့ တာဝန်ကို (၂၀၁၃) ကစပြီး ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။ ‘Shout’ ဆိုတဲ့ မဂ္ဂဇင်းအတွက် မော်ဒယ်ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် အနုပညာလောကထဲကိုတော့ အသက် (၁၄)နှစ်တည်းက ၀င်ရောက်လာခဲ့တာပါ။ Ring girl မလုပ်ခင်တုနန်းက အဆိုတော်အဖြစ်လည်း သီချင်းတွေသီဆို ခဲ့ဖူးပါတယ်။
2. Angelica Anderson
Photo : Angelica Anderson
Angelica Anderson ကတော့ Russia’s M-1 Global MMA ပွဲတွေက နာမည်ကြီး Ring girl ပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ရတာကြိုက်သလို ခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင် တော်တော်လေးကို ဂေါ်တဲ့ Ring Girl ပါ။ Fitness model တစ်ယောက်ဖြစ်သလို သူမရဲ့ Workout ဗီဒီယိုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
3. Eun Jiye
Photo : Eun Jiye
Singapore အခြေစိုက် MMA ပရိုမိုးရှင်း One FC မှာတော့ Ring girls လှလှလေးတွေ အများကြီးပါ။ အဲဒီအထဲမှာ Eun Jiye လည်း တစ်ယောက်အပါအ၀င်ပါ။ သူမဟာ အရင်တုန်းက လေယာဉ်မယ် တစ်ယောက်ပါ။ နောက်ပိုင်းကျမှ မော်ဒယ်လောကထဲ ရောက်လတာပါ။ နာမည်ကြီး Brand တွေဖြစ်တဲ့ Samsung, LG တို့ အတွက်လည်း မော်ဒယ်လုပ်ပေးဖူးပါတယ်။ MMA တင်မဟုတ်ပဲ ကားပြိုင်ပွဲမှာလည်း သူမက ပါဝင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
4. Summer Daniels
Photo : Summer Daniels
Jade Bryce အနားယူပြီးနောက်မှာတော့ Summer Daniels ကို အစားထိုးခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ လှပကျော့ရှင်းတဲ့ Body အလှတွေက MMA ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အပြည့်အ၀ ရစေခဲ့ပါတယ်။
5. Lee Jina
Photo : Lee Jina
Lee Ji Na ကတော့ FC Ring girl အလှပဂေးတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ သူမကတော့ တောင်ကိုရီးယား ဆိုးလ် ကပါ။ Maxim Bikini ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့ဖူးပါတယ်။ Ji Na က သူမကိုယ်သူမ Tomboy လို့ ၀န်ခံခဲ့ဖူးပါတယ်။ Accounting၊ ဥပဒေနဲ့ စီးပွားရေးကို သင်ယူခဲ့သူပါ။ ဘဏ်မှာ အလုပ်လုပ်နေရင်း မော်ဒယ်အေဂျင်စီကနေ ရှာတွေ့ခဲ့ပြီး မော်ဒယ်လောကထဲ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ One FC ရဲ့ ထိပ်တန်း Card-girl တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
အရမြးကိုလနြးတဲ့ MMA Ring Girls (၅)ယောကြ ကို ဖောပြှပေးခငွပြါ တယြ။ Ring Girls ဆိုတာကတော့ လကဝြှပှေဲ့တှေ၊ Kickboxing နဲ့ MMA ပှဲတှမှော ဘယနြှစခြွီ (ဘယြ Round) ရောကနြတယေဆြိုတာကို နံပါတပြှားတှေ ကိုငပြှီးပှတဲ့ အလနြးလေးတှပေါ။ Ring girls တှေ ဟာ (၁၉၆၅) ခုနှစကြ Ring Magazine ကနေ စတငပြေါပြေါကခြဲ့တာပါ။ Boxing ပှိုငပြှဲသငျြကတတေစခြုကို ကိုငထြားတဲ့ Las Vegas မောဒြယတြစယြောကရြဲ့ပုံကို မဂျဂဇငြးမှာ ဖောပြှခဲ့တာပါ။ အဲဒီကနမှေ နောကပြိုငြးမှာ Boxing ပှဲတှမှော ကောငမြလေးတှကေို ငှားကှရငြး Ring girls ဆိုတာ ဖှစလြာတာပါ။ အလနြးဆုံး MMA Ring Girls (၅)ယောကကြတော့ …
Carly Baker ကတော့ UFC အတှကြ ကတတြှသယေတြဲ့ တာဝနကြို (၂၀၁၃) ကစပှီး ထမြးဆောငခြဲ့တာပါ။ ‘Shout’ ဆိုတဲ့ မဂျဂဇငြးအတှကြ မောဒြယပြှိုငပြှဲမှာ အနိုငရြခဲ့ပှီးနောကြ အနုပညာလောကထဲကိုတော့ အသကြ (၁၄)နှစတြညြးက ဝငရြောကလြာခဲ့တာပါ။ Ring girl မလုပခြငတြုနနြးက အဆိုတောအြဖှစလြညြး သီခငြွးတှသေီဆို ခဲ့ဖူးပါတယြ။
Angelica Anderson ကတော့ Russia’s M-1 Global MMA ပှဲတှကေ နာမညကြှီး Ring girl ပါ။ ကိုယတြိုငလြညြး ကိုယကြာယကှံ့ခိုငရြေး လကေ့ငွ့ခြနြးတှေ လုပရြတာကှိုကသြလို ခတစြေကားနဲ့ဆိုရငြ တောတြောလြေးကို ဂေါတြဲ့ Ring Girl ပါ။ Fitness model တစယြောကဖြှစသြလို သူမရဲ့ Workout ဗီဒီယိုတှေ အမွားကှီးရှိပါတယြ။
Singapore အခှစေိုကြ MMA ပရိုမိုးရှငြး One FC မှာတော့ Ring girls လှလှလေးတှေ အမွားကှီးပါ။ အဲဒီအထဲမှာ Eun Jiye လညြး တစယြောကအြပါအဝငပြါ။ သူမဟာ အရငတြုနြးက လယောဉမြယြ တစယြောကပြါ။ နောကပြိုငြးကမွှ မောဒြယလြောကထဲ ရောကလြတာပါ။ နာမညကြှီး Brand တှဖှစေတြဲ့ Samsung, LG တို့ အတှကလြညြး မောဒြယလြုပပြေးဖူးပါတယြ။ MMA တငမြဟုတပြဲ ကားပှိုငပြှဲမှာလညြး သူမက ပါဝငခြဲ့ဖူးပါတယြ။
Jade Bryce အနားယူပှီးနောကမြှာတော့ Summer Daniels ကို အစားထိုးခဲ့တာပါ။ သူမရဲ့ လှပကွော့ရှငြးတဲ့ Body အလှတှကေ MMA ပရိသတတြှရေဲ့ အားပေးမှုကို အပှညြ့အဝ ရစခေဲ့ပါတယြ။
Lee Ji Na ကတော့ FC Ring girl အလှပဂေးတှထေဲက တစယြောကပြါ။ သူမကတော့ တောငကြိုရီးယား ဆိုးလြ ကပါ။ Maxim Bikini ပှိုငြပြှဲမှာ အနိုငရြခဲ့ဖူးပါတယြ။ Ji Na က သူမကိုယသြူမ Tomboy လို့ ဝနခြံခဲ့ဖူးပါတယြ။ Accounting၊ ဥပဒနေဲ့ စီးပှားရေးကို သငယြူခဲ့သူပါ။ ဘဏမြှာ အလုပလြုပနြရငြေး မောဒြယအြဂငွေစြီကနေ ရှာတှခေဲ့ပှီး မောဒြယလြောကထဲ ရောကလြာခဲ့ပါတယြ။ အခုဆိုရငတြော့ One FC ရဲ့ ထိပတြနြး Card-girl တစယြောကြ ဖှစလြာခဲ့ပါပှီ။
လက်ထပ်ပြီး တစ်နှစ်တောင် မပြည့်သေးတဲ့အချိန်မှာ လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Miley နဲ့ Liamတို့အကြောင်း….
အပျိုဖြန်းလေးတစ်ယောက်လို လှနေပြန်တဲ့ မင်းသမီး ခိုင်သင်းကြည်ရဲ့ပုံရိပ်….